जापानले नेपालमा रहेका एक जना नेपालीलाई प्लेन चार्टर गरेर लैजाँदै, विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली भने अलपत्र - Media Dabali
काठमाडौं– जापानले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई आज मंगलबार ओशाका उडाउने भएको छ ।
जापानले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक आरएको वाइडबडी जहाजबाट ती नागरिक स्वदेश लैजाने गरी एयरक्राफ्ट भाडामा लिइसकेको छ । उता जापानमा रहेका करिव ५० हजार नेपाली आफैं पैसा तिर्छौं, देशमा छिर्न देऊ भन्दैछन् । तर, स्वास्थ्य, परराष्ट्र हुँदै गृहसम्म यस्तो अनुरोध पुग्दा अस्वीकृत भएको छ ।
यस्तै दिनैपिच्छे ताकेता भइरहेको छ, साउदी अरबबाट । त्यहाँबाट करिव ५० हजार नेपाली स्वदेश फर्किन नपाए भोकले मर्ने स्थितिमा छन् । दूतावास जान्छन्, जवाफ पाउँदैनन् । विभिन्न माध्यमबाट परराष्ट्र र गृहसँग सम्पर्क त गरे । तर, नेपालको समस्या उही छ–त्यत्रा मान्छेलाई यहाँ कहाँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने ? अनि, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि तिनीहरुलाई स्थायी ठेगानामा पठाउने कसरी ?
तर, भारतबाट छिरेका व्यक्तिहरुलाई यस्तै तरिकाले नेपालमा छिर्न दिँदा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगिसकेको छ । अब खाडीका नेपाली छिरायो भने कति छिर्ला ?
यही प्रश्न तेर्सिंदा विदेशमा रहेका नेपालीको बिचल्ली कायमै छ । जनआस्था साप्ताहिक
मंगलवार, बैशाख ३० २०७७०९:१६:१३